“မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဝဋ်တော်(၁၂)ပါး အကြောင်း”
21/07/2019 Thu Yay 0
“မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဝဋ်တော်(၁၂)ပါး အကြောင်း” ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပ ဆိုသလို ဝဋ်ဆိုတဲ့အရာက ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ မျက်နှာသာမပေးသလို ဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကမှာလည်း လွတ်ကင်းကြတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဦးဇင်းတို့ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားသည်ပင်လျှင် ဝဋ်တော်နှင့်မကင်းတဲ့အတွက် ကျန်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဆိုဖွယ်ရာပင်မရှိပါ။ အတုမရှိတဲ့ မြတ်စွာဘုရားသည်ပင်လျှင် ဝဋ်တော်နှင့်မကင်းကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတော်မူခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဖြစ်နေတာတောင်ရှောင်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ ခံစားရတာပါပဲ။ ခံစားရတာတောင်တစ်ပါးတည်းမဟုတ် (၁၂)ပါးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Continuous reading
အနော်ရထာ မင်းကြီး လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ်တည်ခဲ့သည်ဆိုသော ရွှေစည်းခုံဘုရားနှင့် စိန်ဖူးတော်ကြည့်ခွက်သည်အမှန်တကယ်ဘာအတွက်သုံးခဲ့သလဲ
အနော်ရထာ မင်းကြီး လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ်တည်ခဲ့သည်ဆိုသော ရွှေစည်းခုံဘုရားနှင့် စိန်ဖူးတော်ကြည့်ခွက်သည်အမှန်တကယ်ဘာအတွက်သုံးခဲ့သလဲ လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ်တည်ခဲ့သည်ဆိုသော ရွှေစည်းခုံဘုရားနှင့် စိန်ဖူးတော်ကြည့်ခွက်သည်အမှန်တကယ်ဘာအတွက်သုံးခဲ့သလဲ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ဆိုသည်မှာ ထေရဝါဒဗုဒဘာသာ မြန်မာ့မြေပေါ်အခိုင်အမာ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သော အနော်ရထာမင်း၏ အထိမ်းအမှတ်ကုသိုလ်တော် စေတီတော်ဖြစ်သလို ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြေစိုက်စေတီ အားလုံးနီးပါးတို့မှာလည်း ရွှေစည်းခုံ စေတီတော်ကို စံနမူနာ ထားကာ တည်ဆောက်ကြ Continuous reading
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ပုဂံကို ဗုံးကြဲမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပါမောက္ခကြီး ဒေါက်တာလုစ်
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ပုဂံကို ဗုံးကြဲမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပါမောက္ခကြီး ဒေါက်တာလုစ် ဒေါက်တာလုစ်ကို သမိုင်းပါမောက္ခအဖြစ် သိကြပါတယ်။ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်ကအဆိုကို တင်သွင်းသူနဲ့ ပုဂံအကြောင်း စာအုပ်ကြီး သုံးတွဲ ရေးခဲ့သူအဖြစ် မြန်မာပြည်မှာ သိပါတယ်။ ပုဂံကို ဗုံးကြဲမခံရအောင် သူကာကွယ်ခဲ့တာကိုတော့ သတိမူမိသူ နည်းပါတယ်။ Continuous reading
Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း
Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းပြီး ပေါက်သွားတာပေါ့နော်။ အခြေအနေကတော့ စိုးရိမ်ရတယ်။ ကျနော် ဒီလောက်ပဲ ပြောလို့ရမယ်လို့ ကုတင်တစ်ထောင်ဆေးရုံက ဦးနှောက်ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်သူဝင်းက ပြောပါတယ်။ Stroke (စထုပ်ခ်) လို့ လူသိများတဲ့ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါကို Cerebrovascular accident (CVA); Cerebral infarction; Cerebral Continuous reading
အစာ အဆိပ် သင့်တာကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝ အစားအစာ တွေ
အစာ အဆိပ် သင့်တာကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝ အစားအစာ တွေ အစာ အဆိပ် သင့်တဲ့ လက္ခဏာ က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီကြပါဘူး။ တချို့က ဗိုက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် နာကျင် ထိုးအောင့်ပြီး တချို့က ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ပျို့အန်တတ်ကြပါတယ်။ တခါတလေ Continuous reading
ရင်သားနာကျင်မှုဝေဒနာကို ကုစားပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
ရင်သားနာကျင်မှုဝေဒနာကို ကုစားပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ ရင်သားနာကျင်မှု ဝေဒနာဟာ ရာသီလာခါနီးပြီဆိုရင် အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုြ ကုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။အမျိုးသမီး(၁၀)ယောက်မှာဆိုရင် (၇)ေ ယာက်လောက်ဒီလို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။တစ်ချို့ဆိုရင် မခံ မ ရပ် နိုင်လောက်တဲ့ အထိ နာကျင်ခံစားကြရတာပါ။ ရင်သားနာကျင်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ရာသီလာခါနီးရင် ဘာကြောင့် ဒီလို Continuous reading
မွေးနေ့ ရက်များက ပြောသော လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ
မွေးနေ့ ရက်များက ပြောသော လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ ဒီနေ့ ဗဟုသုတရွာမှ သူငယ်ချင်းတွေကို မွေးနေ့ အလိုက် တိရစ္ဆာန်အကောင်လေး များနဲ့ တင်စားထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမှုအကျင့်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မွေးနေ့ရက်လေးနဲ့တွက်ကြည့်ရတဲ့ ဗေဒင် လေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..ရှင် ကျွန်မ တွက်ကြည့်တော့ အားလုံးနီးပါး မှန်နေတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း Continuous reading
သင့်နှာခေါင်း ပုံစံကပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
သင့်နှာခေါင်း ပုံစံကပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း လူတစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ နှာခေါင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်နော်။ စာဖတ်သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူနိုင်မယ့် နှာခေါင်းပုံစံလေးတွေကို မျှဝေပေးပါမယ်။ ၁။ နှာခေါင်းကြီးကြီး နှာခေါင်း အတိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှည်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နှာခေါင်းကြီးတာမျိုးရှိပါတယ်။ နှာခေါင်းထိတ်နားမှာ ကျယ်ပြီး နှာပေါက်လည်း နည်းနည်းကြီးပါတယ်။ နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေဟာ အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတ္တကြီးပြီး Continuous reading
ချစ်သူကို နှစ် ၂၀ လုံး နေရာမပြောင်းဘဲ စောင့်ခဲ့သူ
ချစ်သူကို နှစ် ၂၀ လုံး နေရာမပြောင်းဘဲ စောင့်ခဲ့သူ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက ရထားဘူတာရုံတစ်ရုံကို ရောက်လာတဲ့သူတိုင်း ထူးဆန်းပြီး သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ သူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ခေတ်သစ် အချစ်သူရဲကောင်း ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တော့ အသက် ၄၇ နှစ် အရွယ် အာဂျီဆိုတဲ့ Continuous reading
မိခင် တစ်ယောက် ၏ အဌမမြောက် မုသား စကား ..!(အရမ်းကောင်း လို့ အချိန် (၃) မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ..)
မိခင် တစ်ယောက် ၏ အဌမမြောက် မုသား စကား ..!(အရမ်းကောင်း လို့ အချိန် (၃) မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ..) ကျွန်တော် ကလေး ဘ၀အရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစု မှာ နေ့စဉ်ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားဖို့တောင် မသေချာတဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ Continuous reading
This Year : 82968
Hits Today : 6022
Total Hits : 1194481